Fangatahana fampakaram-bady maniry miaraka amin'ny tendron-dantelina
Ny sary malaza ho an'ny mpivady iray izay tsy miala amin'ny lamaody dia ilay printsesa. Ny akanjo volom-borona manidina sy ny koketa matevina dia fomba nofinofy. Ary amin'izao fotoana izao ny tendron-dantelina dia heverina ho fanapariahana lamaody rehefa misafidy akanjo lava fampakaram-bady. Ny akanjo toy izany dia mampifandray tsara ny fanatsarana, ny fitiavany ary ny fahazavana, ary manantitrantitra ireo toetra mitovy amin'ny sary rehetra.
Fampakaram-bady akanjo lava mamiratra miaraka amin'ny tendron-dantelina
Ny kofehy kofehy ankehitriny dia mahazatra. Na dia izany aza, ny mifanandrify indrindra sy tsara tarehy, araka ny designer, ity karazana ambony ity dia mifangaro amin'ny akanjo lava. Amin'io tranga io, ny andaniny dia mety ho hafa - tulle, satin-tsivalana na sehatra maromaro misy sarin-dian-be, akanjo miaraka amin'ny petticoat na skeleton. Andeha hojerentsika hoe inona ireo modely ahitana akanjo lava fampakaram-bady miaraka amin'ny tendron-dantelina no mody indrindra amin'izao fotoana izao?
Akanjo mariazy miaraka amin'ny dantelina ambony sy tanana . Tena tsara tarehy sy malefaka ny rantsa-bolany, ary mitazona zana-doko mihidy. Ny tanana lava no manantitrantitra ny halemem-panahy, ny fahamendrehana ary ny fahalemen'ny sary ny ampakariny . Fa, mazava ho azy, ity safidy ity dia tsy miasa mandritra ny vanim-potoana mafana.
Akanjo mariazy miaraka amin'ny dian-kapobakaka miaraka amin'ny rambony . Ho an'ireo tia sary tsara tarehy sy manintona, ny safidy dia tena marina miaraka amin'ny ambadiky ny vokatra. Ny vahaolana lamaody amin'ity tranga ity dia lavaka lava lava avy amin'ny tendan'akondro na tovovavy kely miaraka amin'ny felam-bolo maneno avy amin'ny lohalika.
Fehiloha akanjo lava mamy lava miaraka amin'ny dantelina ambony . Kofehy vita amin'ny kofehy - modely malaza ho an'ny karazana fohy miaraka amin'ny volom-borona. Tena tsara tarehy tsara tarehy akanjo marevaka, rakotra dantily. Ankoatra izany, ny mpahaikanto dia manolotra safidy mahaliana miaraka amin'ny asymmetry - volo fohy sy lava aoriana. Na izany aza, amin'ny endriny marim-pototra - lacy ambony sy satiny na seza ambany - ireo akanjo ireo dia tsy mijery vehivavy sy amam-pitiavana.
Separate mariazy fampakaram-bady
Akanjo mariazy fotsy
Fampakaram-bady akanjo lava
Wedding ho an'ny ampakarina
Ny fampakaram-bady volamena volamena
Famaranana ny tavoahangy sotro amin'ny fampakaram-bady
Azo atao ve ny manana ronono amin'ny hormonina?
Jeans ho an'ny vehivavy matavy - ahoana no fomba hifidianana ny modely tsara sy hanafenana ny tsy fahampiana?
Partitions Walnut - Toe-javatra matavy sy ny fanoherana
Ny fomba hanosihosena ny lehilahy sy ny vokatr'izany
Kitapo fanaovana kitapo
Karazana volom-bolo napetraka amin'ny ririnina - ny fomba tsara indrindra ho an'ny sakafo mamy
Nipoaka taorian'ny Grammy i Heidi Klum namoaka sary mihantsy
Trondro mavo - famaritana
Mbola miresaka momba ny Scientology ihany i Leah Remini: Mesia Tom Cruise ary ny fandraràna ny fifandraisana amin'ireo olon-tiana
Siding - loko